Semalt: 4 Izixhobo zokuLwa kweNkcukacha ezokulondoloza ixesha lakho
Inkqubo kufuneka ibe yinxalenye yesayensi yesayensi. Omnye kufuneka ahlakulele izakhono zokucwangcisa ezona zizenzekelayo. Nangona kunjalo, abanye abantu abakwazi ukufunda iilwimi ezahlukeneyo kunye nokujonga ezinye iindlela ezifanelekileyo. Ezi zilandelayo izixhobo zokucoca idatha zikhulu kubabengezicwangciso.
I-Kimono Labs sele ijikeleze ixesha elide. Enye yezona zinto zilungileyo kwaye ziyamangalisa ukuchonga idatha. Le nkqubo evulekile-mthombo iza nephepha le-15 yemihla yokuvavanya, kodwa inguqulo yalo yamahhala nayo iyafumaneka. I-Kimono Labs icoca yonke i-website, ngokuqala ekuqokelelwa kwedatha ukuya ekutshekeni nasekuqinisekiseni nasekuhanjisweni. I-Kimono Labs iphinda isebenze njengomqambi onamandla wewebhu kwaye ingasetyenziswa ngaphandle kwekhowudi. Ngaphezulu kwelo, kukuvumela ukuba uhlambe inani elikhulu leesayithi ngexesha elifanayo kwaye ungathinteli kumgangatho kuzo zonke. I-Kimono Labs yisoloko iyona khetho lokuqala lwamashishini, asetyenziselwa ukuqokelela idatha, ukubonakalisa, kunye nentlangano. Kwakhona isebenzisa i-analytical data enkulu kubasebenzisi bayo, ukwenza umsebenzi wabo ube lula.
Ukwaziswa kwedatha kwabangenayo iprogram kwakungekho lula lula ngaphambili. Yisiqulatho sewebhu esenziwe ngokuzenzekelayo esakhiwe yiengcali kunye namabango ukuba sele ekhupha inani elikhulu lamakhasi ewebhu kude kube ngoku. Ngenisa. Io ayizukuphela nje kuphela ngabangenalo iprogram kodwa kunye neengcali zesayensi. Esi sixhobo sizithobela ngokuthe ngqo ulwazi olulungileyo kuwe ngaphambi kokuba luqalise ukucubungula kwaye luqeshwe ngugqirha lwezobumbanyo zetekisi. I-hyper-parameters yayo yenza kube lula kuwe ukuba ukhethe idatha engenzi-mpazamo kwaye uyifumene kwifom efunwayo.
3. I-Facebook kunye ne-Twitter API
Iingcali zentlalo zentlalo, i-startups kunye nabangewona program, i-Facebook kunye ne-Twitter API zisebenza kakuhle. Banikezela ngeenkonzo zokuqhawula idatha ngeefayile ezithile ze-API kwaye bathatha imizuzu embalwa ukufumana idatha yakho ifakwe kwisakhiwo esifanelekileyo. Isebenzisa imithombo echaziweyo ukudala iifasethi kunye nokukhawula amaphepha akho ewebhu ngaphandle kwexesha, ngaphandle kwezakhono zenkqubo kunye nolwazi lobuchwepheshe. I-API inokunceda ukuxazulula iingxaki ezahlukeneyo ezihlobene nedatha, ukuva nokuhlela iziphene kwitekisi yakho, kwaye ufumane ulwazi oluphezulu kwiimifanekiso kunye neevidiyo zabasebenzisi.
4. Scraper (i-Chrome Extension)
Ukuba usebenzisa rhoqo i-Google Chrome kwaye isiskrini sakho sewebhu esiyintloko, uzama ukuhlaziya. Ngenye yeenkqubo eziphambili kunye nokusebenza ngokuchanekileyo kwedatha. Yakhiwe ngeteknoloji yokufunda umatshini kwaye iyaklanywa ngokukodwa kubantu abangenayo iprogram. I-scraper inokukhipha ulwazi oluncedo kuwe kwaye inezinto ezininzi ezibalaseleyo. Ukhetho lwalo logalelo lukuvumela ukuba ulahlekise idatha ye-spam kwaye uququzelele ulwazi olusekelwe kwiimfuno zakho, ngaphandle kwesipelingi okanye iimpazamo zegrama. I-Scraper inceda kwakhona ukuhlalutya iimvo zengxelo kunye ne-imeyile, kukufumana idatha echanekileyo, kwaye uqikelele ukuba ngaba luncedo kwi shishini lakho okanye.
Ngokungafani nezinye izixhobo zokucoca idatha eziqhelekileyo, iinkonzo ezingentla zingama-4 azidingi ukuba ube nobuchule bokusebenza kwezobugcisa. Kwakhona, akudingeki ufunde iilwimi zokufunda ukuze uzuze kule i-scrapers idatha . Kufuneka ufake kwaye ubenze ukuba bazuze kwiindlela zabo zokukhetha kunye neenkcukacha zokukhangela idatha Source .